ESI LELEE LOG NKE NLETA NA KỌMPUTA - WINDOWS - 2019
Lelee akụkọ ihe nchọgharị gị na kọmputa Windows
Mgbe ị na-eji kọmputa, ụfọdụ n'ime omume gị banyere nleta na ngalaba na usoro na mmemme ka edere. N'okpuru isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi hụ akwụkwọ nleta.
Anyị na-elele nleta nleta na PC
N'ihe banyere kọmputa, ọ bụghị ndị na-enyocha ihe nchọgharị, akụkọ ihe mere eme nke nleta bụ otu ihe ahụ dị ka ihe ndekọ ihe omume. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịchọpụta data ndị ọzọ kpọmkwem na oge ịgbanwu na PC site na ntuziaka na njikọ dị n'okpuru ebe a.
More Otu esi amata mgbe e megharịrị kọmputa ahụ
Nhọrọ 1: akụkọ ihe nchọgharị
Nchọgharị Ịntanetị na kọmputa bụ otu n'ime usoro mmemme a na-ejikarị emekarị, ya mere, mgbe ị na-ezo aka na akụkọ ihe nchọgharị, a na-akpọkarị ihe nchọgharị akụkọ ihe mere eme. Ị nwere ike ịlele ya, nke otu n'ime isiokwu dị na weebụsaịtị anyị na-eduzi, dabere na ihe nchọgharị weebụ.
Gụkwuo: Ịlele nbanye na Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex Browser, Internet Explorer
Nhọrọ 2: Mmegharị na nso nso PC
N'agbanyeghị usoro sistemụ arụnyere, ọ bụla omume gị, ma ịmepe ma ọ bụ na-agbanwe faịlụ, nwere ike idozi. Anyị nyochaa nhọrọ kachasị mkpa maka ilele omume ndị na-adịbeghị anya n'otu n'ime isiokwu ndị e dere na mbụ.
Gụkwuo: Otu esi hụ ọrụ ọhụrụ na PC
Ọ ga-ekwe omume ịbịaru atụmatụ nke Windows na ekele maka ngalaba "Akwụkwọ ederede ugbu a" mụta banyere mmemme niile mepere ma ọ bụ gbanwee faịlụ ọ bụla. Otú ọ dị, rịba ama na enwere ike ihichapụ data na mpaghara a ma ọ bụ na-akpaghị aka mgbe ị na-ehichapụ usoro ahụ.
Rịba ama: Njide data nwere ike kpam kpam kpamkpam.
Gụkwuo: Otu esi ele akwụkwọ Windows anya
Nhọrọ nke 3: Ihe Omume Windows
Ụzọ ọzọ ị ga-esi lelee akụkọ nchọgharị gị na PC bụ iji akara ngosi ihe omume Windows, dị na mbipụta ọ bụla nke nkesa. Akụkụ a na-azọpụta ozi gbasara omume niile, na-enye gị ohere ịchọpụta aha ngwa ahụ na oge ọ bụ oru ikpeazụ.
Rịba ama: E weere Windows 7 dị ka ihe atụ, ma akwụkwọ akụkọ na nsụgharị nke usoro ihe a nwere nke dịtụ iche.
Gụkwuo: Otu esi mepee ndekọ ihe omume Windows 7
Na mgbakwunye na usoro ndị ahụ a tụlere, ị nwere ike ịchọ nleta akụkọ nleta na ụfọdụ mmemme dị iche ma ọ bụ na saịtị. N'okwu a, hapụ okwu, kọwaa nsogbu dị ugbu a. Ọfọn, anyị kwubiri isiokwu a.